Image News Archive - Mero HeadlineThe News portal of Pokhara
१७ मङि्सर २०७७
सुशान्त गाहा मगर : बसन्त ऋतुको आगमन सँगै नेपालको राष्ट्रिय फुल लालीगुँरास फुल्ने गर्छ । यतिबेला कास्कीको उत्तरी भेगमा रहेका जङ्लहरु प्राय राताम्मे बनेका छन् ।
लालीगुँरास फुले सँगै राताम्मे बनेका अन्नपुर्ण गाउँपालिकाका ति जङ्गलहरु छिचोल्दै अन्नपुर्ण बेस क्याम्प तथा खोप्राक पदमार्ग लगायतका मार्गमा पैदलयात्रा गरेर रमाउने पर्यटकहरुको घुईचो छ ।
यात्रा गर्नु, मनोरम हिमश्रृङ्खलाको दृश्यावलोकन गर्नु मात्र पर्यटकहरुको चाह होईन, कति पर्यटक त रङ्गिबिरङ्गी फुलेका लालिगुरासलाई नियाल्नकै लागि घान्द्रुक–टाढापानी पुग्ने गरेको यहाँका पर्यटन ब्यवसायीहरुको भनाई छ ।
घान्द्रुक–टाढापानी तिनवटा रुटको ट्रान्जिट पोईन्ट हो । जहाँ अन्नपुर्ण बेसक्याम्प, खोप्राक पदमार्ग र बिरेठाटी–पुनहिल पदमार्गमा आवतजावत गर्ने पर्यटकहरु जमघट हुन्छ। यतिबेला सो क्षेत्रमा बिगतमा भन्दा पर्यटकको आवागमनमा बृद्धि भएको पर्यटन ब्यबसायी राम कुमारी गुरुङ बताउछिन । उनी भन्छिन– “ अहिले हिड्न र हिमाल हेर्ने भन्दा बढि पर्यटक लालीगुँरास हेर्न आएका छन्, ४ थरीका लालीगुँरास पाईन्छ यहाँ, हामी सधै बस्नेलाई त रमाईलो लाग्छ झन एक्कासी देख्नेहरुलाई किन मन नपर्दाेहो ।”
टाढापानी क्षेत्रमा रातो, गुलाबी, सेतो र निलो गरेर ४ वटा रङ्को लालीगुँरास पाईने गर्दछ, समुद्री सतहदेखी २००० मि. उचाई देखी ४००० सम्म बसन्त ऋतुमा ४ प्रकारका लालीगुँरास फुल्ने गर्छ । यस भेगमा बाह्य पर्यटकको तुलनामा आन्तरिक पर्यटकहरु केही पातलो देखिन्छ तर उनीहरुको धेय भनेकै राष्ट्रिय फुल लालिगुँरासलाई नजिकैबाट नियाल्नु हो ।
आन्तरिक पर्यटक अमृत लामा गुरुङले टाढापानी आईपुग्दासम्मको थकान राताम्मे बनेका लालिगुँरासको मनमोहक दृश्यले मेटाउने बताउछन् । यस क्षेत्रमा नजिकबाट हिमाल हेर्नका साथै लालिगुँराससँग पिरती साट्न आईपुगेको उनको भनाई छ ।
घान्द्रुक देखी करिब ३ घण्टाको समयाबधीमा टाढापानी पुग्न सकिने अन्नपुर्ण गाउँपालिकाका प्रमुख युवराज कुँवर बताउछन् । कुँवर भन्छन्– “यो पर्यटकिय क्षेत्रको संरक्षण र ब्यवस्थापनको लागि हामी लागिपरेका छौ ।” उनका अनुसार लालिगुँरास सँरक्षणका लागि फुल टिप्न मनाही गरिएको छ । राष्ट्रिय फुलको संरक्षण गर्न अपरिहार्य रहेको कुँवरको तर्क छ । स्थानिय तथा होटल ब्यबसायीको सहकार्यमा पर्यटकिय सो क्षेत्रमा पाईने बिभिन्न प्रकारकार लालिगुँरासको दाउराहरु काट्न समेत रोक लगाईएको कुँवर सुनाउछन् ।
टाढापानी क्षेत्रमा पर्यटकको ओईरो
कास्कीको घान्द्रुक–टाढापानी तिनवटा पदमार्गको ट्रान्जित पोईन्ट हो । जहाँ यतिबेला आन्तरिक तथा बाह्य पर्यटकहरुको ओईरो लागिरहेको छ । अन्नपुर्ण गाउँपालिका –११ मा पर्ने सो पर्यटकिय क्षेत्र समुद्रि सतह देखी करिब ३ हजार मिटर उचाईमा रहेको छ । उक्त क्षेत्रको होटलहरुको समिति टाढापानी पर्यटन ब्यबस्थापन समितिमा कुल ५० वटा होटलहरु सञ्चालनमा रहेका छन् ।
तिन वटा पदमार्गका पर्यटकहरुको सेवा र सुबिधामा मध्यनजर गर्दै देउराली, बनठाँटी, टाढापानी, भैसीखर्क, कोटडाँडा, कोम्राङ, छ्योपार, मेलाचे, सिप्रोङ, चुईले, मेसार, ईसरु, दोबाटो र हिडन लेकमा गरी कुल ५० वटा होटलहरु सञ्चालनमा रहेका छन् तर पछिल्लो समय पर्यटकहरुको आवागमनमा बृद्धि भएपछि थेग्न नसकेको पर्यटन ब्यबसायीहरु बताउछन् ।
टाढापानी पर्यटन ब्यबस्थापन समितिका सचिब तथा युवा पर्यटन ब्यबसायी मनोज गुरुङले केही बर्ष यता बाह्य पर्यटकहरु ह्वात्तै बढेको बताए । बिभिन्न पदमार्गको मध्यबिन्दु भएको कारण टाढापानी क्षेत्रमा पर्यटकको आवागमनमा बृद्धि भएको गुरुङ बताउछन् । आन्तरिक पर्यटकको तुलनामा बाह्य पर्यटकहरुको सँख्यामा बृद्धि भएको बताउदै भन्छन्– “ नेपाली र खैरे गरी दैनिक ११ /१२ सयको सँख्यामा पर्यटक भित्रिने गरेको छ ।”
टाढापानीमा पर्यटकहरु एक रात जसरी पनि बस्नै पर्ने भएकाले यहाँ होटल सञ्चालन गर्दै आएका ब्यबसायीहरुलाई भ्याईनभ्याई छ । यस क्षेत्रको होटलमा ३ देखी ५ जनाले रोजगार पाईरहेका छन् भने स्वदेशमै कर्म गरे फल मिठो पाउन सकिने दरिलो उदाहरण समेत बुझिरहेका छन् ।
स्थानिय स्तरमै उत्पादित खाद्यान्नहरु प्रयोग गरी आर्गानिक खानाको स्वादमा रम्न पाएको बिदेशी पाहुनाहरुको तर्क छ । उनीहरु भन्छन् “यहाँको कल्चर, नेचर र एड्भेण्चर मन पर्‍यो ।” ववली जर्मनबाट आएका पाहुना हुन् । पाँचौ पटक नेपाल आएको सुनाउदै यहाँ साहसी पदयात्रा गर्न मन पाराउनले बताउछन् । उनले अहिले सम्म यात्रामा केही समस्या नभएको बताउदै भारी खुशी ब्यक्त गर्छन ।
नेपाल सरकारले लिएको सन् २०२० मा २० लाख पर्यटक भित्राउने लक्ष्य पुरा गर्नमा सो क्षेत्रको पर्यटकिय गतिबिधिले थप टेवा पुग्ने भएपनि पदमार्ग क्षेत्रको पुर्वाधार बिकासमा अझ ध्यान पुर्‍याउनुपर्ने आवश्यक रहेको नेपाल पर्यटन बोर्ड पोखराका प्रमुख सुर्य थपलियाको तर्क छ ।
बिभिन्न पदमार्गको मध्यबिन्दु र चलनचल्तिका रुटमा भन्दा फरक अनुभव गर्न पाउने र जैबिक बिभिधताकै कारण टाढापानी क्षेत्रमा आन्तरिक र बाह्य पर्यटकको आवागमनमा बृद्धि भएको थपलिया बताउछन् ।
टाढापानी क्षेत्रमा पर्यटन बिकासको सम्भावना सँगै चुनौती
पर्यटकीय शहर पोखराबाट नजिकै र छोटो समयमा पदयात्रा गर्न सकिने बिरेठाँटी–पुनहिल पदमार्ग पछिल्लो आन्तरिक तथा बाह्य पर्यटकको मुख्य गन्तब्य बन्दै गइरहेको छ । कास्कीको अन्नपुर्ण गाउँपालिकामा पर्ने उक्त पदमार्ग, एबिसी बेस क्याम्प तथा खोप्राक पदमार्गका कारण गण्डकी प्रदेश पर्यटनको क्षेत्रबाट समृद्धिको बाटोमा सहजै लम्किन सक्ने अनुमान गर्न सकिन्छ । तर सरोकारवाला निकायले भने गतिलै अभ्यास गर्न आवश्यक देखिन्छ ।
यस क्षेत्रमा यात्रा गर्दा पर्ने टाढापानी जस्ता ट्रान्जिट पोईन्ट जहाँ स्थानियले होटल सञ्चालन गरेर मनग्य आम्दानी गरिरहेका छन् । यस अघि मुलुक सँघीय संरचनामा नजादा प्रत्येक होटलले अन्नपुर्ण संरक्षण आयोजना क्षेत्रलाई बार्षिक ७० हजार राजस्व तिर्दै आएका थिए भने अहिले गाउँपालिकालाई बार्षिक ३० हजार बुझाउदै आएको होटल ब्यबसायीहरु बताउछन् ।
अमेरीकाबाट आफ्नै ठाउँमा केही गर्न भनी गाँउ फर्केका युवा हुन राहुल क्षेत्री । उनी बिदेशमा सिकेको सीपलाई सदुपयोग गर्दै यही मनग्य आम्दानी गर्न सक्ने बताउछन् । उनले स्थानिय स्तरमै आर्गानिक खेती गरी होटल सञ्चालन गर्ने उद्देश्य सहित नेपाल फर्किएको बताए ।
यस क्षेत्रमा पर्यटन बिकासको पर्याप्त सम्भावना छ । सम्भावनालाई बिकासमा परिणत गर्ने लक्ष्य सहित बिदेशीएका युवाहरु सिकेका सीपलाई सदुपयोग गर्न गाउँ पर्किएका छन् । गंगा बहादुर गुरुङ पनि लामो समय जापान बसेर सिकेको सीपलाई आफ्नै ठाउँमा सदुपयोग गरिरहेको बताउछन् ।
“हामीले पर्यटकहरुलाई होटलमार्फत सेवा सुबिधा दिईरहदा केही महङ्गी मान्नुहोला तर ढुवानी र भौगलिक संरचना अनुसार यो मुल्य अत्यन्तै ईकोनोमी हो ।”उनी भन्छन् – “बाह्य पर्यटकको तुलनामा आन्तरिक पर्यटकलाई निकै ब्यबस्था र सहुलियत दरमा मिलाईएको छ ।”
पदमार्गमा यात्रा गर्ने पर्यटकहरु बृद्धि भएपनि यतिबेला बर्षा र हिमपातका कारण कहि कतै बाटो हिलाम्मे भएको बताउदै सरोकारवालाहरुले त्यसको मर्मत संभारतर्फ ध्यान दिन पर्ने तर्क दिन्छन् गुरुङ ।
भारी सम्भावना बोकेको टाढापानी पछिल्लो समय लोकप्रिय बन्दै गैरहेको छ । यसको सम्भावनालाई सरोकारवालाहरुले मध्यनजर गर्दै यस क्षेत्रको पुर्वाधारको ब्यवस्थापन तर्फ लाग्न बाह्य पर्यटकहरुको सुझाब छ ।
सम्भावनासँगै चुनौती पनि उत्तिकै बढ्दो छ । पछिल्लो समय भारी बर्षा र हिमपातका कारण बाटोहरु जोखिम बन्दै गएकाल चुनौती बढेको टान पश्चिमाञ्चल क्षेत्रिय सँघका अध्यक्ष हरि भुजेको भनाई छ । आकस्मिक रुपमा सो क्षेत्रको बाटो ब्यबस्थापनमा स्थानिय सरकार र अन्नपुर्ण संरक्षण क्षेत्र आयोजना तथा स्थानिय ब्यबसायीहरुको बिशेष ध्यान जान पर्ने भुजेलको तर्क छ ।
बिरेठाँटी– पुनहिल पदमार्ग, अन्नपुर्ण आधार शिबिर, र नयां पदमार्ग खोप्राक पदमार्गको ट्रान्जिट पाईन्ट टाढापानी पछिल्लो समय लोकप्रिय बन्दै गएको छ । लालीगुँरास हेर्ने र मनोराम हिमशृङ्खला हेर्नेको भिड लागिरहदा पर्यटन बिकासको सम्भावना भारी रहेको प्रष्ट हुन्छ त्यसैले सो क्षेत्रको सम्भावनालाई सार्थकता तुल्याउन भने सम्बन्धित निकायले बिशेष चाँसो दिन आवश्यक देखिन्छ ।
पोखरामा सार्वजनिक सवारी साधन नचल्दा सर्वसाधारणलाई शास्ती, लखन थापाको शालिकको सुरक्षामा प्रहरी प्रशासन । हेर्नुहोस तस्विर ।
पोखरा, २७ पुस । पोखरामा सार्वजनिक सवारी साधन नचल्दा सर्वसाधारणलाई शास्ती, लखन थापाको शालिकको सुरक्षामा प्रहरी प्रशासन । हेर्नुहोस तस्विर ।
तस्विर : शुसान्त गाहा मगर
कांग्रेसका नेतासहित बारपाकमा भोट माग्दै नयाँ शक्ति संयोजक डा. बाबुराम भट्टरार्इ ।